Ugari hweMontenegro hweMONTIS MOUNTAIN RESORT kamuri yehotera
Kumba yehotera muridzi + mugari weMontenegro
MONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid - 5-nyeredzi nzvimbo yekutandarira ine makamuri 238 iri kuvakwa padhuze nemakomo kuchamhembe kweMontenegro, mudunhu reKolasin, nerutsigiro rwehurongwa hwehurumende "Montenegro Citizenship neInvestment", chirongwa chakapihwa mvumo munaGunyana 2020.
Zvinoenderana nemitemo yechirongwa, kutengwa kwekamuri (suite) paMONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid nemari inosvika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora kana kupfuura zvinoita kuti vakwanise kuwana ugari hweMontenegro (mari yekuwedzera) yemushambadzi iye, mukadzi wake uye vana. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti muzvinashawo haadyari mugove, asi muzvivakwa muMONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid, vachitenga imwe kamuri (suite). Zvakare, iyo fanicha inosanganisirwa mumutengo.
MONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid ichave inotungamirwa neboka rakakurumbira reSplendid, iro rinovimbisa kudzoka nekukurumidza kune yakanaka purofiti manhamba. Zvakare, mune iyo SPLENDID 5 * hotera iri kumaodzanyemba kweMontenegro zvichave zvinokwanisika kugara mahara kwe1 vhiki pagore mugore rekutanga mushure mekudyara kwaitwa.
Uye mushure mekupedzwa kwekuvaka, zvichave zvinokwanisika kugara muMONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid kwemwedzi mumwe pagore, uye izvi zviri kure chete nebhonasi chete yemusimari muchirongwa ichi.
Kutenga kamuri (suite) muhotera MONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid pamutengo we € 250 kana kudarika unopa mukana wekunyorera kuve mugari wemuMontenegro (+ mari yekuwedzera) kune muzvinashawo, mukadzi wake uye nevana vanovimba nemari.
Mutyairi haadyari mugove, asi muzvivakwa muMONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid, vachitenga imwe kamuri (suite).
Iye anovandudza anozvipira kubhadhara muzvinabhizimusi 40% yemubhadharo wemambure kubva mukamuri pagore
Mutengo wekamuri unosanganisira kupa, unozopedzwa maererano nehurongwa hwakajairwa, zvichibva pane zvakagadzirwa zvemukati dhizaini
Hapana mubhadharo wekuchengetedza real estate, zvakasiyana nemamwe mapurojekiti ayo anopawo kutenga
Kusvikira chirongwa ichi chapera muna 2024, muzvinashawo anogona kurarama vhiki imwe pagore pahotera yeSPLENDID (kumaodzanyemba kweMontenegro).
Mushure mekupedza - 1 mwedzi pagore kuMONTIS MOUNTAIN RESORT naSplendid.
Zvinoenderana nemitemo yechibvumirano, zvinokwanisika kutengesa kamuri (suite) mumakore mashanu.
Kana chengetedza mari yekudyara uye ramba uchingogamuchira muzana yezviwanikwa muhotera.
Kolasin inzvimbo diki yekutandarira iri 73 km kuchamhembe kweguta rePodgorica kumahombekombe ekuruboshwe eRwizi rweTara pakukwirira kwemakumi matanhatu nematanhatu pamusoro pegungwa. Yakakomberedzwa nemakomo matatu emakomo - Sinyavina, Komovy, Belasitsa.
Dzokera ku Citizenship yeMontenegro